संसारलाई रुवाएर बिदा भए वासिल, कसको मन नरोला यी बहादुर बच्चाको कहानी सुन्दा !
एजेन्सी । अफगानिस्तानका एक ११ वर्षीय बालकले तालिबानविरुद्ध लडेको युद्धको कहानी सुन्दा जो कोहीपनि अचम्ममा पर्छ । तालिबानी आतङ्ककारीहरुले उनको बाबुको हत्या गरिदिएका थिए । आफ्नो बाबुको हत्याको बदला लिन वासिल अहमद नामका यी बालकले हतियार उठाए ।
एकदुई दिन होइन ४३ दिनसम्म तालिबानको घेराबन्दीविरुद्ध लड्न खडा गरिएको प्रहरी टुकडीको कमाण्डर बनेर त्यसको नेतृत्व गरे । उनलाई आफ्नो इलाकामा हिरोको दर्जा मिलेको थियो ।
यस दौरान उनले कैयन तालिबानी आङ्ककारीहरुलाई मृत्युको बाटो देखाए, करिब ३ हजार गोली खर्च गरे । तर अफसोच यसैसाता तालिबानी आतङ्ककारीले त्रायन कोटमा यी बालकको हत्या गरेका छन् । तालिबानको यो कुकृत्यको अहिले विश्वभरबाट निन्दा भइरहेको छ ।
अब चर्चा सुरु भएको छ, के उनको मृत्युमा मिडिया र सोसल मिडियाहरु जिम्मेवार छैनन् ? जसले उनलाई यतिधेरै चर्चाको पात्र बनाए कि जुन तालिबानीहरुका लागि महत्वपूर्ण सुराक बन्यो । के उनले आफ्नो लोकप्रियताको मूल्य चुकाएकै हुन् ? विषय निकै गम्भीर छ । यदि मिडियाले उनको गोपनियताको सम्मान गरेको भए सायद यी बहादुर बच्चाले ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो कि ? विश्वभर अहिले यही कोणबाट चर्चा र बहस भइरहेको छ ।
१० वर्षको उमेरमा लिएका थिए तालिबानविरोधी मोर्चाको नेतृत्व
वासिलका बाबु र काका तालिबान कमाण्डर थिए । तर, पछि यी दुबै सरकारसँग आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो गल्तिको पश्चाताप गर्दै तालिबानविरोधी लडाईंमा सक्रिय भए । अहिले ति बालकका काका उर्जगन जिल्लाको उर्जगन क्षेत्रमा स्थानीय अफगान पुलिस कमाण्डर छन् । एक वर्षअघि वासिलका बाबुको तालिबानी आतङ्ककारीले हत्या गरेका थिए ।
बाबुको मृत्युले विक्षिप्त भएको वासिलले तालिबानविरुद्ध लड्ने संकल्प गरे । यसक्रममा काकासँगै उनले पनि एके-४७ देखि लिएर गन, मोटार र रकेट लञ्चरसमेत चलाउने तालिम लिए । उनमा बदलाको भोक यति थियो कि, जसले यी अत्याधुनिक हतियार चलाउन सिक्न उनलाई केही दिन नै पर्याप्त भयो ।
गत समरमा उनको क्षेत्रमा तालिबानले कब्जा जमायो । यस हमलामा वासिलका काकासहित कैयन घाइते भए । त्यसपछि यी साहसी बालकले सरकारी फौजको तर्फबाट युद्ध मोर्चाको कमाण्ड लिए । नेतृत्वमात्रै लिएनन्, स्वयम् युद्धमोर्चामा होमिएर कैयन तालिबानी लडाकुलाई मृत्युको बाटो देखाए ।
अन्य ७५ जना सिपाहीलाई साथमा लिएर उनले आफ्नो क्षेत्र तालिबानको कब्जाबाट मुक्त गराए । तालिबानको टुकडी यति ठूलो थियो कि वासिलको फोर्सभन्दा कैयन गुणा ठूलो । ४३ दिनको लगातार युद्धपछि वासिलले सफलता हासिल गरेका थिए ।
त्यसपछि उनलाई त्रायन कोट ल्याइयो । त्यहा एक स्कूलमा भर्ना गराइयो । वासिल पढ्नमा एकदमै तेज थिए । उनको अंग्रेजी निकै राम्रो थियो । यतिबेलासम्म उनी सेलिब्रेटी नै भइसकेका थिए । सोसल मिडियामा पनि उनको बहादुरीको निकै चर्चा र प्रसंसा भयो ।
अन्तराष्ट्रिय मिडियाका लागि निकै ठूलो खबर बन्यो । तर, यही चर्चा र लोकप्रियताको मूल्य वासिलले मृत्यूको रुपमा चुकाएका छन् । अहिले विश्व रोइरहेको छ । यसै साता आफ्नो स्कूलतर्फ गइरहेकाबेला तालिबानीहरुले उनको हत्या गरेका छन् ।
बंगलादेशमा रेल दुर्घटना, १६ को मृत्यु, ४० घाइते
सुरक्षा खतरा बढेपछि मोरालेसले मेक्सिकोमा राजनीतिक शरण लिँदै
इजरायली आक्रमणमा प्यालेष्टिनी जिहादी कमाण्डरको मृत्यु, श्रीमती पनि मारिइन्
पाकिस्तानमा बजार भाउ आकाशियो, नियन्त्रणका लागि ‘विशेष सेल’ गठन गर्न खानको निर्देशन
अस्ट्रेलियाको दुई राज्यमा सङ्कटकाल घोषणा
इराकमा समय अगावै निर्वाचन गर्न अमेरिकाको आग्रह
अन्ततः १४ वर्ष लामो सत्ता त्याग्दै मोरालेसले दिए राजीनामा
पूर्वप्रधानमन्त्री सरिफ सोमबार लण्डन जाने
बेवारिसे अवस्थामा छोडिएको नवजात शिशुलाई जंगली कुकुरले जिउँदै खाएपछि…
अयोध्या फैसला र करतारपुर कोरिडर खुलेसँगै #hindumuslimbhaibhai ट्रेन्डिङमा
अष्ट्रेलियामा डढेलोमा परी तीन जनाको मृत्यु
सर्वोच्चको फैसलालाई हारजितको रुपमा हेर्नु हुँदैनः नरेन्द्र मोदी
अयोध्या फैसलाबारे पाकिस्तानी अधिकारी के भन्छन् ?
अर्बपति माइकल ब्लुमबर्गले अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्ने इच्छा देखाए, के भन्छन् ट्रम्प ?
प्रदर्शनकारीद्वारा चर्चमा आक्रमण, बहुमूल्य सामग्री लुटिए, यशुको मूर्ति तोडफोड
ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति लुला रिहा
प्रदर्शनमा घाइते भएका विद्यार्थीको ज्यान गयो, हङकङ थप तनावग्रस्त हुन सक्ने
पत्रकारप्रति अनुदार बन्दै मोदी, लेख लेखेकै आधारमा ‘नागरिकता’ खोसियो
इरानले आणविक सम्झौता उल्लंघन गरेको अमेरिकाको आरोप
भारतमा पहिरोको संकेत दिने ’सेन्सर’ परीक्षण हुँदै